မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်လာစေဖို့ အိုင်ဒီယာ( ၁၀ )မျိုး
၁. "ခဏကျမှ" ဆိုတာကနေ "ခုချက်ချင်း " လို့ပြောင်းလိုက်ပါ
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စောင့် နေ စောင့်နေ ...စောင့်နေ အုံးမယ်ဆိုရင် တစ်သက်တာလုံး အချိန်ကိုစောင့်နေတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ ပဲ အဲ့လို ဖြစ်သွားနေတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ကိုခုချက်ချင်း လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။
၂. အရာရာဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ယုံကြည်ပါ
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ် မယုံကြည်ရင်ကိုယ်ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆုံးစွန်းထိမ လုပ် မိ ပဲနေတတ်ပါတယ် ။ အဆိုတော် " ကို အငဲ တို့ ကိုလေးဖြူ "တို့ လည်း အမေဝမ်းကမွေးလာတာနဲ့ တန်းပြီးသီချင်းဆိုတတ်ကြတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။လူတိုင်းဟာ သုညကနေစတာ ချင်းအတူတူပါ ။သူတစ်ပါးလုပ်နိုင်ရင် ကိုယ် လည်း လုပ်နိုင်ရပါမယ် ။
လစာကောင်းကောင်း လုပ်ငန်းခွင်နေရာ ကောင်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဝန်ထမ်းများသည် အများအားဖြင့် သည်လုပ်ငန်းခွင် ကို တစ်သက်တာဟု မှတ်နေကြ သည်။ တစ်သက်လုံး တည်မြဲနေ သောအရာဟု ထင်ကြသည်။ သည်ထဲမှာ မွေ့ပျော်နေရင်း အပြင်ကမ္ဘာကို ထိတွေ့မှုနည်း လာကြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ရန် မကြိုး စားမိတော့။ သို့သော် ဘယ်အရာ မျှ မမြဲဟုဆိုသော လောကနိယာ မအရ တစ်နေ့မလွှဲ မရှောင်သာ သည်လုပ်ငန်းကို စွန့်ခွာရတော့ မည်ဆိုသည့်အခါ အခက်ကြုံရ တော့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ အခြေခံကတော့ ပစ္စုပ္ပန် ကာလမှာ စွန့်လွှတ်ပြီး အနာဂတ်ကာလအတွက် အကျိုးရှိအောင် ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပညာသင်ကြား မှုဟာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ငွေအကုန်အကျခံပြီး အနာဂတ် ကာလဘဝမြှင့်တင်မှု အတွက် အကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နည်းပညာအသစ်ကို တီထွင်သုံးစွဲတာ ဟာလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံသာဖြစ်ပါတယ်။
Careerနဲ့ Job ဘယ်လိုကွဲပြားသလဲ